Olee otú iji tọghata YouTube ka QuickTime MOV?
> Resource> YouTube> Olee otú iji tọghata YouTube ka QuickTime MOV (Yosemite gụnyere)
Ọ bụrụ na ị a hụrụ YouTube, ị pụrụ na-aga eleta YouTube weebụsaịtị na-ekiri ebube online videos, ma ọ bụ na ị na-nwere ọtụtụ YouTube videos ịchekwa na gị PC ma ọ bụ Mac. Chọrọ iji tọghata ndị a YouTube ka QuickTime MOV, ma onye online YouTube video ma ọ bụ a Obodo-disk otu, n'ihi na playback na QuickTime, management na iTunes ọbụna mmekọrịta ka Apple ngwaọrụ dị ka iPhone, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ?
Ọ bụrụ otú ahụ, isiokwu a ebe a bụ ịrụ ụka adịghị nri ebe ị na-achọ, tumadi ewebata Olee otú iji tọghata YouTube ka QuickTime MOV iji a ike-na-atụ aro YouTube ka MOV Ntụgharị: Wondershare Video Converter Ultimate. The nkuzi n'okpuru agụnye abụọ akụkụ:
Nkebi nke 1: Olee otú ibudata YouTube videos
Nkebi nke 2: Olee otú iji tọghata YouTube ka QuickTime MOV
Cheta na: The nkuzi bụ na ndabere nke Windows n'elu ikpo okwu, ma Mac ọrụ nwekwara ike-ezo aka n'otu nkuzi iji tọghata YouTube ka MOV na Mac-agba ọsọ OS X Mountain Odum, odum wdg, maka usoro na ma ịwa usoro bụ ukwuu yiri.
1) Gaa YouTube ukara saịtị, chọta a YouTube video ịchọrọ ibudata.
2) Pịa bọtịnụ gbapụta a dialog window, ebe ị mkpa pịa "Tinye URL" button na-abanye na YouTube video URL tinye ya na download ndepụta.
3) Mgbe nbudata, dị nnọọ kụrụ "ebudatara" ịhụ ebudatara YouTube videos.
Nkebi nke 2: Olee otú iji tọghata YouTube ka QuickTime MOV?
1: Mbubata ebudatara YouTube video
See "Emechara" taabụ, nri pịa ebudatara faịlụ, na-aga "Open File ebe" nhọrọ ịchọta ndị a faịlụ, mgbe ahụ, kpọmkwem ịdọrọ & dobe ha ka ha uku a Video Converter Ultimate 's akakabarede interface.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye ndị ọzọ faịlụ, iche site n'elu ụzọ, ị na-enwe abụọ ụzọ ime nke a:
1) Dọrọ na dobe faịlụ na ị chọrọ mbubata.
2) Pịa bọtịnụ maka faịlụ mgbakwunye ngwa a.
2: Họrọ QuickTime MOV H.264 dị ka mmepụta format
See "mmepụta Format" akara, na-emeghe format ndọpụta ndepụta, họrọ MOV na "usoro"> "Video" udi. Mgbe ahụ ị chọrọ ka H.264 ka video codec na "Mwube" window.
3: Malite YouTube ka QuickTime MOV akakabarede
N'oge a, ihe ikpeazụ gị mkpa ime bụ see "tọghata" button iji tọghata YouTube ka QuickTime MOV. Mgbe akakabarede, ị ga-anya ịchọpụta na converted MOV a n'ụzọ zuru ezu na-akwado site Apple ngwaahịa dị ka QuickTime, iTunes, iPhone wdg
All Atụmatụ na ị chọrọ maka YouTube Nchọpụta nsogbu
Olee otú Embed YouTube Video ka keynote on Mac OS X (Yosemite & Mavericks gụnyere
2 Ụzọ Embed YouTube Ndetuta egwu ọkpụkpọ
Olee otú Mee a Pụtara Photo ngosi mmịfe maka YouTube